Xoghayaha Guud ee QM iyo Guddoomiyaha Midowga Afrika oo ugu baaqay siyaasiyiinta wadahadal | allsanaag
Xoghayaha Guud ee QM iyo Guddoomiyaha Midowga Afrika oo ugu baaqay siyaasiyiinta wadahadal
Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika, Moussa Faki Mahamat iyo Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay António Guterres, ayaa qoraal ay si wadajir ah u soo saareen waxa ay ugaga hadleen arrimaha siyaasada dalka iyagoo ku baaqay in siyaasiyinta ay wadahadal ka yeesheen khilaafka arrimaha doorashooyinka.
“Waxaan ku amaanaynaa shacabka iyo hoggaamiyeyaasha Soomaaliya horumarka ay ku tallaabsatay sannadihii la soo dhaafay dhinaca xasilinta dalka, Guulihii adkaa ee la soo hoyiyay ayaa markhaati u ah sida adag ee dadka Soomaaliyeed ay ugu go’antahay nabad iyo barwaaqo waarta, tobannaan sano oo xasilooni darro ah.”
Qoraalka ayaa sidoo kale loogu baaqay siyaasiyiinta soomaaliyeed sidii looga hadli lahaa arrimaha doorashooyinka.
“Gudoomiyaha iyo xoghayaha guud waxay ugu baaqayaan hogaamiyaasha soomaalida inay dib u bilaabaan wada hadalada kuna shaqeeyaan niyad sami si looga gudbo caqabadaha siyaasadeed ee ugu dambeeya ee doorashooyinka loo dhanyahay sida ugu dhaqsaha badan uguna ixtiraamaan heshiiskii ay wada gaareen 17kii Sebtember 2020.”
Guddoomiyaha iyo Xoghayaha guud waxay mar kale ku celinayaan sida ay uga go’an tahay inay sii wadaan taageerada ay siinayaan dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ee ku wajahan tubta nabadda iyo barwaaqada.
← 8 Most Amazing Mega Projects in Ethiopia Rooble oo shacabka Soomaaliyeed uga digay khatarta cudurka COVID-19 →